जनैपूर्णिमा : सुनसान छन् मठ मन्दिर [तस्बिरहरु]- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १९, २०७७ तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ, तस्बिर : इलिट जोशी
काठमाडौँ — आज जनैपूर्णिमा । बिहानैदेखि भक्तजनलाई टीका लगाई हातमा रक्षा बन्धन (डोरो) बाँध्ने, जनै फेर्ने र पूजा गरेर जनैपूर्णिमा मनाइँदैछ । तर यसपटक भने कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) महामारीका कारण विभिन्न मठ मन्दिरमा भीडभाड भने छैन ।
ललितपुरको बंगालमुखीस्थित कुम्भेश्वरमा यसपटक ३० जनालाई मात्र पास वितरण गरिएको थियो । उनीहरुलाई नियमित पूजाआजाका लागि पास वितरण गरिएको हो । त्यसैगरी पशुपतिनाथलगायतका मन्दिरमा पनि यस पटक सामान्य दर्शनार्थीको उपस्थिति कम रहेको छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा आजको दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर यो पर्व मनाउने प्रचलन पनि रहेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ १३:०४
संक्रमितलाई किरा परेको खाजा
केन्द्रका संयोजक भन्छन्, ‘कमसल खालको पुरानो केराउ परेकाले राम्रोसँग केलाएर पकाउँदा पनि कुनैकुनैमा किरा भेटियो ।’
श्रावण १९, २०७७ जितेन्द्र साह
विराटनगर — विराटनगरस्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा वितरित खाजामा किरैकिरा भेटिएपछि त्यहाँ उपचाररत कोरोना संक्रमितहरूले विरोध जनाएका छन् । केन्द्रमा सोमबार बिहान दिइएको खाजामा किरा भेटिएको हो ।
बिहान ७ बजे खाजामा दिइएको मटरमा किरैकिरा देखेपछि खान नसकेको एक संक्रमितले फोनमा बताइन् । ‘संक्रमित भनेर हेला गरेजस्तो लाग्यो, चेक गरेर खान दिनुपर्ने होइन र ?,’ उनले भनिन् ।
पेसाले स्वास्थ्यकर्मी ती संक्रमितले यस्तो बेला रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने खाना दिइनुपर्नेमा चिल्लो–पिरो पुरी र तरकारी दिइएकोमा समेत आश्चर्य प्रकट गरिन् । ‘रुघा लाग्दासमेत चिल्लोपिरो खान दिनु हुन्न,’ उनले भनिन् ।
खानादेखि शौचालयको सरसफाइसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड उक्त केन्द्रले पूरा नगरेको उनले बताइन् । ‘केन्द्रमा भन्दा घरमै बस्यौं भने चाँडो निको हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान् र परिवारजनसँग मलाई यहाँबाट लैजान अनुरोध गरेको छु, यहाँ रोगभन्दा तनावले मरिन्छ ।’
केन्द्र संयोजक ज्ञानबहादुर बस्नेतले खाना पकाउने क्रममा भएको मानवीय त्रुटिले यस्तो हुन गएको बताए । ‘सकेसम्म राम्रै व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ, त्यही पनि बेलाबेलामा थाहा नपाएर यस्तो भइहाल्छ,’ बस्नेतले भने ।
कमसल खालको पुरानो केराउ परेको र राम्रोसँग केलाउँदा पनि कुनैकुनैमा किरा भेटिएको उनले बताए । ‘पकाइसकेपछि पनि देखिएन,’ उनले भने, ‘बिरामीलाई वितरण गरिसकेपछि मटरकेराउ फुटेर किरा बाहिर निस्केको हो ।’ संक्रमितबाट गुनासो आउनेबित्तिकै त्यो सबै फाली पुनः अर्को पकाएर खुवाएको संयोजक बस्नेतले बताए ।
केन्द्रमा दिनको चारै पटक शाकाहारी खाजा–खाना दिइने गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहान ७ र दिउँसो २ बजेको खाजामा कहिले रोटी–तरकारी, कहिले पुरी–तरकारी, कहिले पराठा र कहिले दहीच्युरा दिइन्छ । बिहान ११ र राति ८ बजेको खानामा दाल, भात, हरियो तरकारी, फलफूल, पापड र चिप्सलगायत दिइन्छ । ‘रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन च्यवनप्राश, अश्वगन्धा र गुर्जो पनि दिन्छौं,’ बस्नेतले भने ।
अहिले ६० जना संक्रमित रहेको उक्त केन्द्रको व्यवस्थापन प्रदेश १ सरकारले हेर्छ । प्राविधिक जनशक्ति र अन्य सहयोग भने संघीय सरकारअन्तर्गतको कोसी अस्पतालले उपलब्ध गराउँछ ।
कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा संक्रमितलाई दिइने खाना स्वास्थ्य मापदण्डअनुरुप नभएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको कोसी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासले बताए । ‘प्रदेश १ सरकार अन्तर्गत उक्त केन्द्र रहे पनि त्यहाँ कार्यरत कोसीका चिकित्सकहरू र सरोकारवाला अधिकारीलाई संक्रमितलाई तोकेको मापदण्डअनुरूप स्वास्थ्यवर्धक खाना वितरण गर्न सुझाव दिएको छु,’ उनले भने ।
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ १२:४५
केसी समर्थकको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप [तस्बिरहरु]
तस्बिर: अंगद ढकाल
झरीको परवाह नगरी डा. केसीको समर्थनमा माइतीघरमा प्रदर्शन
आन्तरिक हवाई उडान सुरु [तस्बिरहरु]
माइतीघरमा डा. केसीको पक्षमा मौन प्रदर्शन [तस्बिरहरु]
हेर्नुहोस् पानी भरेपछि रानीपोखरीको रुप [तस्बिरहरु]